Sawirro: Sida Beijing looga ciiday maanta – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Sawirro: Sida Beijing looga ciiday maanta
By Abdihakim Sharif Ali / June 5, 2019 June 5, 2019
Beijing(SONNA)-Mas'uuliyiinta Safaarada Soomaaliya ee Waddanka Shiinaha ayaa ku dhawaad 2000 oo Muslimiin ah salaadii Ciida kula dukaday Misaajid weyn oo ku dhex-yaala Safaarada dalka ee Suudan ee Caasimada Beijing maanta oo Arbaca ah.
Shacbiga dalkan Shiinaha ayaa 1.4-ta bilyan, waxaa muslimiin ah, 28 milyan kamida sida Culimada iyo mas'uuliyiinta waddanka ay u sheegeen Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed ee SONNA, waxaana ku yaala magaalada misaajida dhisan dhawr iyo toban qarni.
[caption id="attachment_394538" align="alignnone" width="640"] Barxadda S. Sudan kadib Salaad. S/qade: Maxamed Cisman, June 5, 2019[/caption]
Balse Muslimiinta salaada Ciida ku oogtay gudaha Misaajidka iyo barxada Safaarada Suudan ayaa u badan diplomasiyiin, arday, iyo ganacsato dalal badan oo Muslimiin ah ka soo jeeda.
Safiirka Soomaaliya ee waddanka Shiinaha, Amb. Cawale Cali Kullane, qonsulka safarada ahna ku xigeenkiisa, Cali Maxamed Xuseen iyo u qayb-sanaha safarada ee dhanka socdaalka,Maxamed Cabdi Warsame ayaa farxadooda ku aadan la wadaagay Shacbiga Muslimiinta, si gaar ah ummadda Soomaaliyeed, una rajeeyey nabbad, midnimo iyo bar-waaqo, sannadka dambena uu Alle nagu gaarsiiyo nabbad iyo caafimaad.
[caption id="attachment_394539" align="alignnone" width="640"] Madaxda Safaarada iyo Wariyaha oo sawirka wadajir ah ka muuqda[/caption]
"Waa maalin ku weyn dadka Muslimiinta oo soo gutay acmaasha bisha barakeysan ee Ramadan, Alle ha inaga aqbalo aqmeesheena, Waxan hambalyo leeyahay shacbiga Soomaaliyeed, waxan rajeynayaa inaan gacanta is-qabsano kuna gaarno guul, midnimo iyo hurumar", Amb. Kullane ayaa SONNA u sheegay.
Wariyaha SONNA ee Beijing, Maxamed Cismaan Cabdi 'Black Cobra' ayaa waxa si gaar ah u soo jiitay sida Safaarada Sudan uga khidmeynayso umadda Muslimiinta ee ee ku dhaqan caasimada Shiinaha marka ay noqota gudashada cibabada Alle, waxaana ay sannad walba si gaar ah uga soo dirtaa misaajidkaas laba Imam oo tujiya saladaha Tarawixda iyo Tajudka oo quraanka oo dhan lagu akhriyo, halka misaajidaha kale suurado gaa-gaaban lagu dukado.
[caption id="attachment_394540" align="alignnone" width="640"] Haweenka oo isla mar la duktay ragga, sawiro ku galaya barxada misajidka[/caption]
Uga dambeyn Wariyaha ayaa diyaarinaya macluumaad badan oo Muslimiinta waddanka Shiinaha ku saabsan oo siyaabo kale duwan wax looga sheego, wuxuna safar ku tagaya qaar kamida 33-da gobal ee Shiinaha uu ka kooban.
[caption id="attachment_394550" align="alignnone" width="640"] Wariyaha SONNA oo salaamaya Safiirka dalkeena ee China, Amb. Kulalne[/caption]
W/D: Maxamed Cismaan Cabdi " Black Cobra"
ku gaar Twitter: @mohamedosma4